Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Saaxiibtinimo Ee Xulalka Spain v Saudi Arabia. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Saaxiibtinimo Ee Xulalka Spain v Saudi Arabia.
LINE-UPKA MACQUULKA AH:SPAIN
Xulka dalka Spain ayaa dib u kulmay markii ugu horeysey tan iyo markii ay ku soo guuleysteen horyaalka Europe. Waxana ciyaartoodii ugu horeysey noqonaysaa kulan saaxibinimo oo ay xulka Saudi Arabia la yeelanayaan iyadoo uu soo xulay tababare Del Bosque 23 ciyaaryahan.
Inkastoo uu ka soo laabtay maqnaansho dheer oo ay ku qaadatay sidii uu uga soo kabsan lahaa lug ka jabtay ayaa lagu soo daray xulka David Villa. Balse iyadoo uusan ciyaro badan dheelin ayaa waxa marka ugu horeysa la filayaa in Torres uu tababaruhu geliyo garoonka.
Carles Puyol ma ciyaari doono isagoo weli ka soo kabanaya dhaawac ka soo gaaray wajiga. Waxaana si wadajir ah daafaca dhexe u ciyaari doona Sergio Ramos iyo Gerard Pique.
Del Bosque oo ciyaarihii ugu dambeeyey ku ciyaarayay qaabkahas 4-3-3 ayaa la filayaa inuu qadka dhexe ciyaarsiiy Xavi, Xabi Alonso iyo Sergio Busquets. Kadib markii dhowaan uu ku guuleystey abaalmarinta sanadka ciyaaryahanka ugu fiican Yurub ayuu Iniesta waxa uu ka dhinac ciyaari doonaa Torres dhinaca weerarka.
Waxaa kale oo weerarka ka qeybqaadan doona Pedro oo ciyaarihii ugu dambeeyey si weyn u muuqday. Javi Martinez iyo Alvaro Negredo laga reebay xulkan.
Tartamada loogu soo gudbayo ciyaaraha adduunka ayaa toddobadkan bilaabanaya balse Saudi Arabia ayaa kuguuldareysatay inay u soo gudubto tartanka Brazil 2014 kadib markii hal kulan oo kaliya ay ku badisey tartamadii loogu soo baxayay ee qaarada Asia.
- kulankii ugu dambeeyey ee labada dal oo ahaa mid saaxibtinimo waxa uu dhacay 2010 taasoo Spain 3-2 ku badisey David Villa, Fernado Torres iyo Xabi Alonso ayaa goolasha u dhaliyey.
- Spain waa dalka kaliya ee taariiqda dunida ee ku guuleysta saddex tartan oo caalami ah oo isku xiga.
- Ciyaaryahanka kaliya ee ka dhaliya kulan rasmi ah oo ay Spain iyo Saudi Arabia ciyaareen waxa uu ahaa Juanito oo ciyaarihii adduunka ee 2002 u dhaliyey gool xulka Spain iyadoo ciyaartana 1-0 ku dhamaatay.
- Labo ciyaaryahan oo u dhashay Saudi Arabia ayaa weligeed gool ka dhaliyey Spain waana Osama Hawsawi iyo Sultan Al Namare.
- Tababaraha Saudi Arabia waa Frank Rijkaard oo waqti wanaagsan la soo qaatay kooxda Barcelona intii u dhexeysay 2003-2008.
- Saudi Arabia ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah isreebreebka koobka adduunka 2014, iyagoo garaacay xulka Thailand.